कोभिड भनेर विरामीको डाईलासिस नगरी बस्न मेरो चिकित्सकिय धर्मले मिलेन: डा. पाण्डे - GBM
कोभिड भनेर विरामीको डाईलासिस नगरी बस्न मेरो चिकित्सकिय धर्मले मिलेन: डा. पाण्डे
२०७८ श्रावण १ gautam buddha sandesh	0 Comments
मृगौला मानव शरीरको महत्व पुर्ण अँग हो । नेपालमा दिनानुदिन मृगौलाका रोगी बढीरहेको आँकडा आइरहेको छ । जव मृगौला आफै विरामी पर्छ त्यसले अन्य अँगहरुलाई समेत प्रमावित पार्न सक्दछ । मृगौला केहो, यसमा रोग लाग्न सक्ने कारणहरु लगायतका विषयमा सिद्धार्थनगर सिटी हस्पिटल भैरहवाका अध्यक्ष एवम बरिष्ठ मृगौला रोग विशेषज्ञ डा. सुवोध कुमार पाण्डे संग गौतम बुद्ध सन्देश दैनिकका लागि गोपाल बन्जाडेले गरेको कुराकानीको अँश ः
कोभिडको संक्रमण अहिले आएर केही कम भएको छ । कोभिड १९को संक्रमणको सुरुवाती अवस्थामा कत्तिको जोखीममा रहनु भयो ?
सबै चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी हरु जोखिममै रह्यौँ । त्यसमा पनि म मृगौला रोगीको उपचारमा प्रत्यक्ष संलग्न रहनु पर्ने भएकाले अझ बढी जोखीममा थिएँ । कोभिडको जोखीम भनेर विरामीको डाईलासिस नगरी बस्न मेरो चिकित्सकिय धर्मले मिलेन ।सबैको आशिर्वाद र मेरो ईम्युनिटीले गर्दा होला म सुरक्षित रहेँ ।
सिद्धार्थनगर सिटी हस्पिटलले नयाँ भवन बाट सेवा प्रदान गर्न सूरु गरिसकेको छ –तपाई हरुलाई शुभकामना पनि छ । पहिलेको भन्दा थप सेवा हरु के के रहनेछन नया भवनमा ?
हामीले लामो समय सम्म भाडाको भवनवाट स्वास्थ्य सेवा दिईरहेका थियौँ । त्यसबेला पनि हामीले स्तरीय उपचारमा विशेष ध्यान दिईरहेका थियौँ । आफ्नै भवनमा सरि सकेपछि हामीले यहाँका विरमीलाई अन्यत्र जान नपर्ने गरि सेवा सुचारु गरेका छौँ । हामीले अहिले सिटी स्क्यान सेवा सुरुगरेका छौँ । काठमाडौँका अनुभवि चिकित्सकहरु हामी संग नियमित रहनु हुने छ। जसमा हाडजोर्नी,न्यूरो, मृगौला,स्त्री तथा प्रसुती,छाला रोग विशेषज्ञ वरिष्ठ सर्जनहरु हुनुहुन्छ । आईसियु, एनआईसियु, वार्ड पनि संचालनमा छ ।
विषय प्रबेश गर्न चाहेँ डा. साव , मृगौला कस्तो अँग हो यसका काम केके हुन हाम्रा पाठकलाई बताईदिनुस ?
मृगौला मानव शरिरको अति नै महत्वपूर्ण अंग हो । यो मानिसको ढाड संग जोडिएर रहेको हुन्छ । मुख्य गरेर मृगौलाले रगत छान्ने काम गर्दछ । रगतमा रहेका शरिरलाई नचाहिने तत्वलाई पिशावको रुपमा वाहिर फाल्ने कार्य यसले गर्दछ । यसले केही हर्मोन पनि उत्पादन गर्दछ जुन हर्मोन शररिको लागि अत्यावश्यक रहेको हुन्छ ।
मृगौला किन र कसरी फेल हुन सक्छ ?
मृगौलाले रगत छान्ने काम गर्दछ, यसले शरीरको तापक्रम लाई नियन्त्रण राख्ने, व्लड प्रेशरलाई नियन्त्रण गर्ने लगायतका कार्य गरेको हुन्छ । कहिले काही मृगौलामा पत्थर पर्न पनि सक्छ । यदि त्यो पत्थरले मृगौलाले छानेर मुत्र थैलिमा पठाएको पिसाव रोक्यो भने वा हामीले आफैले धेरैबेर पिसाब रोक्यौँ, भने मृगौलालाई लोड पर्छ , जम्मा भएको पिसाव मृगौला तिर नै फर्कन सक्ने सम्भावना रहन्छ ,अन्य कतिपय रोगहरु प्नि हुन्छन ती रोगका कारण पनि मृगौला फेल हुने सम्भावना धेरै हुन्छ ।
्मृगौला विरामी पर्यो भनौ वा मृगौलामा समस्या आयो भन्ने शंका विरामीले कसरी गर्न सक्छन?
सबै भन्दा पहिला त मृगौला विरामी हुनु भन्दा पहिले नै रोकथाम गर्न जरुरी हुन्छ , त्यसको लागि समय समयमा मृगौला को अवस्था कस्तो छ भनेर रगतको जाँच गराउनु पर्दछ। अव मृगौला विरामी पर्यौ भने विरामीको आँखामुनी सुन्निन्छ । पिशाब कम हुन्छ,खुट्टा पनि सुन्निन सक्छ । ज्वरो आउन सक्छ । पिसाब सम्बन्धि गडबडी भयो भने तुरुन्त चिकित्सक संग जँचाउनु पर्छ ।
.कस्तो अवस्थामा विरामीलाई डाईलासिसको आवश्यकता पर्दछ ?
विरामीलाई औषधीले काम नगरेको अवस्थामा मात्र डाईलासिस गर्ने गरिन्छ । सके सम्म विरामी छिटो उपचारको लागि आएमा डाईलासिसको आवश्यकता नपर्न पनि सक्छ ।
डाईलासिसमा लाग्ने खर्च कति हो ? सामान्य नागरिकले डाईलासिस गराउन सक्छन कि सक्दैनन्?
सिद्धार्थनगर सिटी अस्पतालले रुपन्देहीमा नै पहिलो पटक निशुल्क डाईलासिस सुरुगरेको हो । सम्बन्धित निकायको सिफारिसको आधारमा मृगौला रोगीको उपचार निशुल्क हुन्छ । सुरुको अवस्थामा सामान्य जाँचपडताल खर्च लाग्ने गर्दछ । त्यो खर्च सर्बसाधारणले थेग्न सक्ने नै हुन्छ ।
्य अन्तमा केही भन्नुन्छ ?
मृगौला मानव शरिरको महत्वपूर्ण अँग हो । समय समयमा सम्वन्धित चिकित्सकवाट मृगौलाको जाँच गराऔँ । पानी अत्याधिक पिउने वानी बसालौ ।
← ब्लाउजभित्र लुकाई ल्याउँदै गरेको ब्राउनसुगर सहित ३ जना पक्राउ
जोर बिजोर प्रणाली हटेसँगै सवारी र मानिसको चाप, निषेधाज्ञा भने कायमै →
शिक्षा व्यवहारिक हुनुपर्छ : न्यौपाने
२०७५ चैत्र २८ gautam buddha sandesh	0
दर्ता बालबालिकाहरुको विदाई